‘अपहरण शैलीमा हिरासतम राखियो’ : सुवास गिरी « Ramailo छ
‘अपहरण शैलीमा हिरासतम राखियो’ : सुवास गिरी
‘कृ’ निर्माता सुवास गिरीले आफुलाई छलफलका लागि बोलाएर अपहरण शैलीमा हिरासतमा राखिएको दुःख व्यक्त गरेका छन् । अग्रजबाटै आफुले असल व्यवहार नभएको उनको दुखेसो । बुधबार निर्माता गिरीले आफ्नो फेसबुकमा लेखेका स्टाटस यस्तो छ :
म सुवास गिरी, नेपाली फिल्म निर्माण गर्दै आइरहेको निर्माता । मैले कहिले पनि नेपाली फिल्मसँग आवद्ध हुनु भएका अग्रज निर्माताहरु, समकालिन निर्माताहरु, कलाकारहरु, प्रबिधिकहरु र पत्रकार साथीहरुलाई सदैव माया र सम्मन गर्दै आइरहेको छु । तर मलाई हिजो छलफलको लागी आउनु भनेर जुन अपहरण शैलीमा हिरासतमा राखी मनोमनी तरिकाले गीत चोरिएको आरोपमा क्षतिपुर्ती स्वरुप ११ लाख तिराइयो । यो घटनाले मलाई एकदमै दःखीत बनाएको छ । संगीतकारले गरेको गल्तिमा पनि छलफल गरेर समस्या समाधान गर्न तयार हुँदाहुँदै पनि अग्रज दाईहरुबाट यस्तो व्यवहार के उचित हो ?
अग्रजहरुको यस्तो व्यवहारबाट चलचित्र क्षेत्रमा आउने नयाँ निर्मता तथा कलाकार हरुले के पाठ सिक्ने ? अब सबैले सोच्ने बेला आएको छ । यो घटनामा प्रतक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा साथ दिनु हुने सबैप्रती आभार तथा धन्यवाद ब्यक्त गर्दछु ।